Waa maxay xanuun maskaxeed?
Author Topic: Waa maxay xanuun maskaxeed? (Read 19712 times)
« on: March 07, 2008, 06:51:49 PM »
Xanuunnada maskaxdu waa caam. Ilaa lix million oo qof yaa laga helay, lakiin waxa ka jira aragtiyo aad u kala duwan oo ku saabsan waxa uu yahay, waxa sababa, iyo sida daka laagu caawin karo inay ka raystaan.
Dadka maskaxda ka jirani waxay la kulmi karaan dhibaatooyin sida ay u fekeraan, dareemaan ama u dhaqmaan. Tani waxay si wayn u saamayn kartaa cilaaqooyinkooda, shaqadooda iyo qiimaha noloshooda.
Qabitaanka xanuun xagga maskaxda ah dhib uma aha qofka qaba uun ee sidoo kale qoysaskooda iyo saaxiibadooda.
Xanuunnada maskaxdu waxay ka mid yihiin xaaladaha loogu faham yaryahay ee mujtamaca ka jira. Taas darteed, dad badan ayaa qaba
xaqiraad iyo takoorid joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, caksiga waxyaalaha buugta ku qoran, iyo telefishannada iyo filimada waxa lagu
sheego, dadka maskaxda ka xanuunsan intooda badani waxay ku noolaan karaan nolol wax soo saar iyo guul leh haddii ay helaan daawada iyo kaalmada ku haboon.
Dadka qaarkood, daawooyinka iyo la tacaalid kale oo caafimaad ayaa caawinkara, dadkalese waxba uma taraan.
Daawaynta xagga caafimaadka waxa laga yaabaa inay tahay qayb ka mid ah waxa caawiya raysashada khasabse ma aha inay tahay qaybta ugu mahiimsan. Waxa muhiim ah in la xasuusnaado in maskaxda oo laga xanuunsadaa aysan ahayn qofka qaladkiisa, mana aha calaamad daciifnimo mana aha wax la isku quursado.
In si gaar ah loogu arko dhibaatada qof kale inay tahay jirro u baahan daawayn waa aragti aad u gaaban. Taasina waxay naga hor istaagtaa inaan ka fakerno raadadka badan ee ay ku leedahay nolosha qofka, iyo sida ay u fekerayaan, dareenkooda iyo dhaqankooda, tasoo keeni karta dhibaato xagga maskaxda. Waxay kaloo naga hor istaagi kartaa inaan u kuur gallo la tacaalidda aan dhinaca caafimaadka ahayn ee la heli karo.
Sababahaas dartood, dad badan baa jecel inay ka hadlaan isku buuqsanaanta xagga dareenka ama maskaxda ah halkay ka oran lahaayeen waalli.
Re: Waa maxay xanuun maskaxeed?
« Reply #1 on: March 23, 2008, 06:04:11 AM »
Nice presentation but could u pls tell the phathophysiological or mechanism behind MANIA,DEPRESSION schizoprenia which is the most popular mental illness
« Reply #2 on: March 23, 2008, 04:17:22 PM »
Walaal abdicade waa ku mahadsantahay su'aashaada.
Waxaan ka soo hadlay noocyada loo kala qaado xanuunada maskaxda:
Waxaana jeclahay inaan mid mid uga hadlo kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa aad soo sheegtay.
Views: 49456 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 49909 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 45854 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 31028 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 30276 January 22, 2019, 08:47:10 PM